Ihe ị ga-ahụ na Córdoba na ụbọchị ole na ole | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | Spain obodo, Córdoba
Córdoba, obodo nke nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme n'azụ ya, ọtụtụ afọ nke mmeri na mmeri ọzọ, na ihe ndị ọzọ nke ọdịbendị ndị ọzọ, dị ka Arab, nke a pụrụ ịhụ n'ọtụtụ ụlọ ihe atụ ya. Obi abụọ adịghị ya na nke a bụ otu n'ime ebe kachasị baa uru na mpaghara ndịda, yana Granada ma ọ bụ Seville, n'ihi na ọ bụ obodo nwere ọtụtụ ihe.
Anyị na-egosi gị ihe ole na ole ihe ị ga-ahụ na Córdoba ọ bụrụ na naanị ụbọchị ole na ole agaa. Ọnọdụ ndị ahụ na-adịkarị mkpụmkpụ, yabụ na ị ga-eme ọfụma nleta ahụ, na-edo anya ihe ndị anyị ga-ahụ dị ka ihe dị mkpa. Nke a bụ ndepụta na ole na ole n'ime ha.
1 Alakụba nke Cordoba
3 Akwa mmiri Rome
4 Templelọ nsọ ndị Rom
5 Alcazar nke Ndị Kraịst nke Ndị Kraịst
6 Ifuru warawara
Alakụba nke Cordoba
La Alakụba-Katidral nke Córdoba Ọ bụ ebe a na-ahụ maka ihe nketa ụwa kemgbe 1984. Ọ bụrụ na enwere ihe ncheta nke ị na-agaghị echefu ma ọ bụrụ na ịga Córdoba ma ọ bụ gafee ya, ọ bụ ụlọ alakụba a, ebe ọ bụ ihe ncheta kachasị mkpa ma dị mkpa na West West, na na-anọchi anya ụdị Umayyad. N'ime ya ị nwekwara ike ịhụ ụdị ndị ọzọ, site na akụkụ Ndị Kraịst nke katidral, dịka Baroque ma ọ bụ Renaissance, yabụ ọ bụ ihe nketa nke nnukwu akụkọ ihe mere eme na nka. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ọ bụla gbasara ụdị anyị na-ekwu maka ya, nleta ahụ bụ ihe dị ịtụnanya, n'ihi oke mma nke oghere ya, site na ihu na ọnụ ụzọ ruo ọtụtụ ụlọ ụka ndị dị n'ime. Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Patio de los Naranjos a ma ama ma ọ bụ ụlọ hypostyle nwere ogidi ndị ama ama, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye nnọchi anya Córdoba.
Na akụkụ ndịda nke roman akwa anyị na-achọta Torre de la Calahorra, ụlọ na-agbachitere, nke pụtararịrị na ederede sitere na narị afọ nke iri na atọ. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ elu a nwere Living Museum nke Al-Andalus, yana nleta nke gafere otu elekere, ebe a na-atụle ọdịbendị, akụkọ ihe mere eme na ụzọ ndụ na Al-Andalus. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe ncheta ochie, nke bụ eziokwu bụ na ọ nwere ọtụtụ mmezigharị na usoro ndị mejupụtara kemgbe ọtụtụ narị afọ, ya mere a ka echekwara ya nke ọma.
Akwa mmiri Rome
Mgbe anyị gara Torre de la Calahorra anyị nwekwara ike ịhụ akwa roman nke Córdoba. A maara ya dị ka 'Old Bridge', naanị otu nke dị n'obodo ahụ na narị afọ 20, ọbụlagodi ihe kachasị ewu ewu n'oge a. Owuwu ya bidoro na narị afọ mbụ AD na Guadalquivir. Otu mmasi ya bu na osimiri di kwa na obere nchekwa eke ekpuchitere, a na akpo Sotos de la Albolafia n'ihi otutu umu anumanu bi ebe ahu, ufodu no na onwu.
Templelọ nsọ ndị Rom
Ọ bụ ezie na anyị chere na na Córdoba, naanị ihe anyị ga-eme bụ ụtọ akụkụ dị iche iche nke Al-Andalus, anyị agaghị echefu na tupu mgbe ahụ mpaghara a bụ ndi romans meriri, nakwa na a ka nwere ọtụtụ ihe ịrịba ama nke njem ya site na ebe a. Achọpụtaghị ụlọ nsọ Rome a ruo afọ 50. templelọ nsọ a dị n’elu ikpo okwu ma nwee ogidi isii n’ihu ya na iri n’akụkụ ya, ebe ọ bụ ụlọ nsọ ndị Kọrịnt. Ọ ga-abụrịrị na e guzobere mpaghara a n'etiti narị afọ nke mbụ na nke XNUMX. Ihe anyị nwere ike ịhụ taa bụ nsonaazụ nke ewughachiri ihe ndị fọdụrụ na mpaghara ahụ. O doro anya na ọ bụ ụlọ nsọ a raara nye òtù nzuzo nke alaeze ukwu, ya bụ iji fee ndị eze chi ahụ ofufe.
Alcazar nke Ndị Kraịst nke Ndị Kraịst
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ya, nke a bụ ụlọ sitere na ndị agha, wuru n'oge iwu nke Alfonso XI nke Castile, na ebe nchekwa kacha ochie Andalusia. Ndi nke a obibi nke ndị ọchịchị Katọlik ruo ihe karịrị afọ asatọ. Ebe ị ga-eleta nwayọ, yana ebe mara mma dị mma n'ime na n'èzí, yana otu ụdị nke mmụọ nsọ Mudejar. Ọ dị n'akụkụ ụlọ elu anọ, nke ọ bụla nwere akụkọ ihe mere eme nke ya, dị ka oflọ Elu nke Njụta Okwukwe, ebe e debere ebe ndebe ihe mgbe ochie. N'ime anyị nwere ike ịga ọtụtụ ọnụ ụlọ na ime ụlọ ime ụlọ, ihe a na-ahụkarị na ụlọ ndịda. Moorish Patio, na Patio de las Mujeres ma ọ bụ Sala de los Mosaicos bụ ebe ịga. Mana ọ bụrụ na enwere ebe a na-agaghị echefu na ebe a ewusiri ike, ọ bụ Gardens nke Alcazar, nnukwu oghere dị egwu na cypresses, osisi oroma na ụdị ndị ọzọ, na-elekọta ya anya nke ọma.
N'elu ihe ncheta, nke bara ụba n'obodo Córdoba, e nwekwara ndị njem nleta na ezigbo ebe na-egosipụta ọdịnala Andalus ugbu a. Na ifuru warawara Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị ewu ewu na ebe nlegharị anya na obodo ahụ. Dabere na Calle de Velázquez Bosco, ọ bụ ebe dị warara nke na-eduga n’otu akụkụ. O siri ike ịchọta ma ọ bara uru ịgagharị gburugburu ebe a mara mma nke jupụtara na okooko osisi n'èzí.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-ahụ na Córdoba na ụbọchị ole na ole
Undergbọ ala London ugbua na-agba ọsọ n'abalị